Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany: inona ny manaraka?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany: inona ny manaraka?
The Ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT) dia naorina 35 taona lasa izay Louis D'Amore.
IIPT dia mitarika ny dinika manerantany momba ny andraikitry ny fizahan-tany sy ny fandriampahalemana.
The Tambajotra fizahan-tany manerantany nanampy vondrona liana iray momba ny Peace Through Tourism izay notarihin'ny Mpanorina IIPT sy ny filoha Louis D'Amore. Ny mpikambana WTN rehetra dia mety mandray anjara: https://wtn.travel/groups/peace/
Juergen Steinmetz, mpanorina ny World Tourism Network, dia nilaza hoe: "Faly izahay miara-miasa amin'i Louis D'Amore sy IIPT ary faly izahay mandray anjara amin'ity hetsika lehibe ity ary mampiseho ny fifandraisan'ny fizahan-tany amin'ny fandriampahalemana."
Fahatsiarovana ny fandriam-pahalemana 35 taona amin'ny alàlan'ny fizahan-tany
35 taona IIPT: Ny lalana ho avy!
Androany, tontonana iraisampirenena momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany no nanao famelabelaran-kevitra nandritra ny dinika tontonana nandritra ny 2 ora sy sasany narahin'ny World Tourism Network sy eTurboNews.
Don King, mpikambana ao amin'ny birao IIPT - Ivotoerana misy ny mpitsoa-ponenana Syriana, Jordania
Dr. Taleb Rifai, Ivon-toeran'ny Mpitsoa-ponenana Syriana, Jordania (nasaina haneho hevitra)
Louis D'Amore, mpanorina sy filoham-pirenena IIPT - Tetikasa Park Peace Peace IIPT
Maga Ramasamy, Filoham-pirenena, IIPT Nosy Ranomasimbe Indianina - Fizahan-tany sy fizahan-tany maharitra sy tompon'andraikitra
Ramatoa Mmatsatsi (tononina MaChachee), Filoham-pirenena, izay vao niforona IIPT South Africa Chapter
Andreas Larentzakis, sehatry ny mpandeha fandriampahalemana IIPT
Ajay Prakash, VP mpanatanteraka IIPT ary filoha, IIPT India - Tetikasa fiompiana ho an'ny fiarahamonina
Nikki Rose, fihavanana amin'ny sakafo
Diana McIntyre Pike, Filoham-pirenena, IIPT Karaiba - Fizahan-tany ho an'ny fiarahamonina
Gail Parsonage, Filoha, IIPT Aostralia
Kiran Yadov, filoha lefitra ary mpiara-manorina, IIPT India
Fabio Carbone, masoivoho IIPT ao amin'ny Large and President, IIPT Iran - Fetin'ny fandriam-pahalemana; Tetikasa tantara IIPT
Ny Fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fizahan-tany androany dia ampahany amin'ny andiam-panentanana ho an'ny World Tourism Network.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny tambajotran'izao tontolo izao momba ny fizahantany (WTN): www.tv.travel